मुख्य समाचार – Page 135 – Makalu Television
Home > मुख्य समाचार (Page 135)
August 21, 2018 मुख्य समाचार	0
नवीन कर्ण विराटनगर क्षेत्रमा पछिल्लो समय हत्या हिंसासहितका अपराधको श्रृंखला बढ्दै गएको छ । श्रृंखलाबद्ध घटनाकै कडीका रुपमा मंगलबार श्रीमानले गरेको दाउ प्रहारबाट श्रीमती र छोरीसहित अन्य एक गम्भीर घाइते भएका छन् । मंगलबार बिहान साढे ९ बजे सिरहा गोलबजारका ४५ बर्षिय दीलिप सहनीले आफैले भागी विवाह गरेका विराटनगर–११ पिचराकी ४०
विराटनगरमा शवसहित प्रदर्शन
August 20, 2018 मुख्य समाचार	0
४ भदौ ,विराटनगरमा कार्यस्थलमै शनिबार राति हत्या गरिएका टंक भट्टराईका परिवार र आफन्तले शवसहित सोमबार विराटनगरमा प्रदर्शन गरेका छन । विराटनगर ३ स्थित न्यु विक्की हार्डवेयरमा शंकास्पद अवस्थामा मृत भेटिएका विराटनगर ४ का मृतक भट्टराईका परिवार सहित वडा नम्बर ३ का वडाबासीले हत्यारालाई कारवाही र राहतको माग गर्दै प्रर्दशन गरेका
पूर्व राजदूत केशव झाको आफ्नै घरमा हत्या
August 20, 2018 August 21, 2018 मुख्य समाचार	0
काडमाडौं, भदौ ४ । फ्रान्सका लागि नेपालका पूर्व राजदुत ८० वर्षीय झाको आज विहान थापाथलीस्थित उहाँकै निवासमा मृत अवस्थामा भेटिनुभएको हो । यसैबीच, उहाँको शवलाई पोष्टमार्टमका लागि महाराजगंजस्थित शिक्षण अस्पताल पु¥याइएको छ । यसअघि प्रहरीले घटनास्थलको अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा पूर्वराजदुत झाको घरका सहयोगी २ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा
अत्यधिक गर्मीका कारण विराटनगरमा सञ्चालित विद्यालयहरु २ दिन विदा
August 19, 2018 मुख्य समाचार	0
विराटनगर, ३ भदौ । अत्यधिक गर्मीका कारण विराटनगरमा सञ्चालित विद्यालयहरु २ दिन विदा हुने भएका छन । विराटनगर महानगरपालिकाले विराटनगर महानगरभित्र सञ्चालित सामुदायिक र निजी विद्यालयहरु सोमबार र मंगलबार छुट्टी दिने निर्णय गरेको छ । गर्मीका कारण विद्यार्थीहरु वेहोस हुन थालेपछि छुट्टी दिनु परेको महानगरले जनाएको छ । विराटनगरको तापक्रम
विराटनगरको भृकुटीचोकमा सुरक्षा गार्डको हत्या
विराटनगर, ३ भदौ । विराटनगर–१३ की शिखा घिमिरेको हत्या भएको तीन दिन नबित्दै विराटनगरमा एक व्यक्ति हत्या भएको छ । विराटनगरमा सुरक्षा गार्डका रुपमा काम गर्ने एक ब्यक्तिको हत्या भएको हो । विराटनगर–४, ज्योतिनगर टोलका ४८ वर्षीय टंकप्रसाद भट्टराईको आफ्नै कार्यस्थलमा हत्या भएको छ । विराटनगर–३ भृकुटीचोकस्थित न्यू बिक्की हार्डवेयरमा सुरक्षा
अबको ९ महिनामा कटहरीमा रेल
August 19, 2018 मुख्य समाचार, राष्ट्रिय समाचार	0
विराटनगर, ३ भदौ । नेपालमा रेल आउने र नेपाली भूमिमा गुडेको हेर्नलाई अब धेरै समय कुर्नु नपर्ने भएको छ । मोरङको कटहरीसम्म अबको ९ महिनाभित्र मालबाहक रेल आउने गरी लिक निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । विराटनगरमा रेल आउला र ? त्यो सपनामै सीमित होला कि ? धेरैले गर्ने प्रश्न
युवतीको आफ्नै प्रेमीले गरे हत्या
August 17, 2018 मुख्य समाचार	0
विराटनगर, १ भदौ । मोरङको ग्रामथान गांउपालिकामा एक युवतीको धारिलो हतियार प्रहारगरी हत्या भएको छ । विराटनगर–१३ की २३ वर्षीया शिखा घिमिरेको हत्या भएको हो । विराटनगरबाट स्कुटरमा सँगै ग्रामथान गाउँपालिकाको नहर छेउमा लिएर गएका शिखाकै छिमेकी दिनेश भट्टराईले उनको धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । को
नेश्ले इण्डिया कम्पनीको जुस पिउँदा विद्यार्थी बिरामी
विराटनगर, १ भदौ । भारतको नेश्ले इण्डिया कम्पनीले उत्पादन गरेको ‘माइलो’ इनर्जी ड्रिंक पिउँदा विराटनगरको एक स्कुलका दर्जन बढी विद्यार्थीमा स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ । इनर्जी ड्रिंक पिएका कयौं विद्यार्थीमा वान्ता र बेहोश हुने समस्या देखिएको छ । विराटनगर–२ स्थित बूढानिलकण्ठ सेकेण्डरी इंगलिस स्कुलमा सो कम्पनीको उत्पादनको प्रचार गर्न पुगेका प्रतिनिधिले
कार्यालय समयमा अस्पतालमा भेटिदैनन् चिकित्सक
August 17, 2018 August 17, 2018 मुख्य समाचार	0
भदौ १, विराटनगरको कोशी अञ्चल अस्पतालका अधिकांश चिकित्सकहरु आफ्नो ड्युटी समय भन्दा अगाडि नै निस्कने गरेको पाइएको छ । कोशी अञ्चल अस्पतालमा चिकित्सकहरु समयभन्दा अगाडि नै निस्कने गरेकाले टाढाटाढाबाट आएका सेवाग्राहीहरुलाई समस्या परेको छ । शुक्रबार मकालु टेभिजिनका संवाददाता अस्पतालमा पुग्दा साढे १२ बजेको थियो । तर अधिकांश ओपीडीमा कार्यरत
रोजगारीको ग्यारेन्टीको माग गर्दे अपाङ्गता भएकाहरुको धर्ना
August 16, 2018 August 16, 2018 मुख्य समाचार	0
३१ साउन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि रोजगारीको ग्यारेन्टीको माग गर्दे बिहीबार प्रदेश नम्बर १ को राजधानी विराटनगरमा उनीहरुले पर्दशन गरेका छन । सामाजिक विकास मन्त्रालयको सडकमा उनीहरुले धर्ना दिएका हुन् । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई दुःख दिने मात्र काम गरेको भन्दै उनीहरु सामाजिक विकास मन्त्रालयको अगाडिको सडक वारपार ट्राइसाइकल सहित